‘जहाज चढ्ने ठूलो रहर’- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
‘जहाज चढ्ने ठूलो रहर’
दमौली — सास फेर्न कठिन भएकाले पाइप राख्नुपर्छ । बायाँ आँखा मासुले पुरिएको छ । दायाँ आँखा भए पनि ज्योति छैन । त्यही पनि पट्टीले बाँधेर सुत्नुपर्छ । नत्र निद्रा पर्दैन । नबाँधे नानी सुक्ने, चिप्रा आउने र घाउ हुने गर्छ ।
कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका तनहुँको भिमाद नगरपालिका–३ बगुवाका २८ वर्षीय शिव थापामगरको यस्तो अवस्था जन्मजात भएको होइन । २०७० सालमा करेन्ट लागेपछि अंगभंग भए । घरनजिक बासीपानीमा विद्युत्को शाखा लाइन जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेको थियो । टाउकोले अचानक थ्री फेज लाइनमा छुँदा घटना भयो । ‘करेन्ट लागेको २० दिनपछि बल्ल होस आएछ,’ उनले भने ।
सबै अनुहार डढ्यो । हातका पाखुरा, ढाडको मासु निकालेर नाक बनाउने र डढेको अनुहारमा मासु राखिएको छ । अंगभंग अवस्थामा कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको उनको भनाइ छ । ‘ठेकेदारमार्फत विद्युत्को काम गर्दै आएको थिएँ,’ उनले भने, ‘दिनको ५ सय ज्याला पाइन्थ्यो । करेन्ट लागेपछि यस्तो हालत भयो ।’
श्रीमती संगीता, छोरी मेनुका र घरपरिवारलाई सुखमा राख्ने सपना सजाएका उनी वैदेशिक रोजगारीमा लागि जाने तयारीमा थिए । भिसा झरिसकेको थियो । भोलिपल्ट काठमाडौं जाने तयारी थियो । अघिल्लो दिन घटना भएर जीवनमा वज्रपात पर्‍यो । ‘जहाज चढ्ने ठूलो रहर थियो,’ उनले भने, ‘एम्बुलेन्स चढेर अस्पताल पुगेछु ।’ पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा २० दिन उपचारपछि काठमाडौं साँखुस्थित सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल लगियो । उपचारपछि उनी बोल्न र घर वरपर लट्ठीको सहारामा हिँड्डुल गर्न सक्ने भएका छन् ।
त्यही अस्पतालमा जर्मन डा. रोबर्ट र डा. सन्तोष नेपालीले औषधोपचार गरिदिएको उनले बताए । नयाँ आँखा राख्न सके देख्न सकिने चिकित्सकको सल्लाह छ । तर आर्थिक अवस्थाले आँखा राख्न समस्या छ । ‘देख्न पाए श्रीमतीलाई काममा सघाउँथें,’ उनले भने, ‘तर पैसा छैन ।’ अहिलेसम्म करिब ३० लाख रुपैयाँ उपचारमा खर्च भएको छ । तर त्यो तिर्नु नपरेको र केही रकम चन्दास्वरूप पनि उठेकाले औषधि किन्न सहज भएको उनले बताए ।
प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १३:०८
यार्डमै थन्किए सवारीसाधन
पर्सा — आयातकर्ताले जाँचपास गरी सवारीसाधन नलग्दा वीरगन्जस्थित आईसीपी तथा वीरगन्ज भन्सार परिसरमा ठूलो संख्यामा सवारीसाधन थन्किएका छन्  । जिप, कार, भ्यानजस्ता हलुका सवारीसाधन लामो समयदेखि भन्सार नाकामै थन्किएका हुन्  ।
जिप, कार, भ्यानजस्ता हलुका सवारीसाधन लामो समयदेखि भन्सार नाकामै थन्किएका हुन् । एकीकृत सुरक्षा जाँचचौकी सञ्चालक इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका वीरगन्ज प्रमुख हेमेन्द्रमोहन शाहीका अनुसार लामो समयदेखि आयातकर्ताले आफ्नो सवारीसाधन छुटाएर नलग्दा त्यस्ता सवारीसाधनको पार्किङ गर्न समस्या हुँदै गएको छ । उनले आईसीपी परिसरमा झन्डै एक हजार सात सय र वीरगन्ज भन्सार परिसरमा करिब ३ सय गरी बिभिन्नखाले सवारीसाधन थन्किएको बताए ।
‘हामीले आयातकर्तालाई पटक–पटक आफ्ना सवारी जाँचपास गराएर लग्न भनिरहेका छौं,’ शाहीले भने, ‘तर उनीहरू पार्किङ शुल्क घटाउनुपर्‍यो भनी दबाब दिइरहेका छन् ।’ आईसीपी परिसरमा प्रतिसवारीसाधन पार्किङ शुल्क मासिक १३ हजार देखि १४ हजार रुपैयाँ लाग्छ । वीरगन्ज भन्सार परिसरमा भने पार्किङ शुल्क नभई विलम्ब शुल्क लाग्ने गरेको छ । वीरगन्ज भन्सारमै मात्र विलम्ब शुल्कबापत आयातकर्तासँग करिब १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ ।
महँगा सवारीसाधन हुने भएकाले भन्सार यार्डमै पनि कुनै भवितव्य वा चोरी, टुटफुट आदि हुँदा त्यसले समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने भएकाले भन्सार प्रशासन यस्ता सवारीसाधन आयातकर्ताले सकेसम्म छिटो लगिदेऊन् भन्ने चाहन्छ । महँगो हुने र भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्यअभिवृद्धि कर आदि गरी राजस्वसमेत सवारीसाधनको मूल्यको २ सयदेखि २ सय ५० प्रतिशतसम्म बुझाउनुपर्ने भएकाले आयातकर्ताले एउटा कार जाँचपास गराइलग्न झन्डै १ करोड रुपैयाँ लाग्न जान्छ । हाल दुवैतर्फका भन्सार यार्डमा थन्किएका जिप, कार, भ्यानमा बढी टोयोटा र ईसीजू कम्पनीका छन् ।
भारतमा जीएसटी लागू भएपछि आयातकर्ताले सवारीसाधन खरिद गरिसकेपछि १ सय १५ दिनभित्र भारतको सीमा कटाई नेपालतर्फ ल्याइसक्नुपर्ने अनिवार्यता छ । नेपालका कतिपय आयातकर्ताले सीमापारि भारतीय सहर रक्सौलमा १ हजारदेखि १ हजार ५ सयवटासम्म सवारीसाधन पार्किङ गरी राखेका छन् । उनीहरूले रक्सौलको पार्किङ स्थलबाट १ सय १५ दिन पुग्नुअघि नै वीरगन्जको भन्सार यार्डमा ल्याएर आफ्ना सवारीसाधन राख्ने गरेका छन् । लक्जरियस सवारीसाधनको मुख्य बजार राजधानीनै रहेको र त्यहाँबाट गाडी बुकिङ भएपछि मात्र आयातकर्ताले भन्सारबाट जाँचपास गराएर लग्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत मनीष महतो भन्सार यार्डमा ल्याइएका यस्ता सवारीसाधन सामान्यतः ६० दिनभित्र जाँचपास गराई लग्नुपर्ने बताउँछन् । ६० दिनसम्म यसरी भन्सार यार्डमा सवारी पार्किङ गरेबापत कुनै शुल्क लाग्दैन । ६० दिनपछि अर्को ३० दिनसम्म प्रतिकिलो दैनिक ४० पैसाका दरले शुल्क लाग्छ । त्यसपछिको ३० देखि ६० दिनसम्म प्रतिकिलो ६० पैसाका दरले शुल्क लाग्छ । यो ६० दिनभित्र पनि सवारीसाधन जाँचपास गराई नलगे ६१ औं दिनपछि प्रतिदिन प्रतिकिलो ८० पैसाका दरले विलम्ब शुल्क लाग्ने उनले बताए ।